Isgaarsiinta Suuqgeynta: Ka fogow inaad u ekaato Qiyaanoole!
5-ta ugu wanaagsan ee si kadis ah u noqda Qiyaanoole
Isniin, November 15, 2010 Monday, May 9, 2016 Gowraca Robby
Ku saabsan cayda ugu xun ee suurtogalka ah ee aad ka heli karto internetka waa in lagugu eedeeyaa inaad tahay spammer. Weerar kasta oo kale oo loo geysto dabeecadaada ma lahan awood joogitaan oo isku mid ah. Marka qof u maleeyo inaad tahay spammer, waad ku dhowaan doontaa marna ku noqo dhankooda wanaagsan. Wadada loo maro spamville waa hal wado oo keliya.
Tan ugu xun, waa wax la yaab leh oo sahlan in la qaado talaabooyin ku saabsan noqoshada spammer iyada oo aan xitaa la ogaan! Waa kuwan shanta siyaabood ee ugu sarreeya (feker ahaanteyda, dabcan) oo lagugu eedeyn karo inaad tahay spammer adigoon ogeyn.
# 5 - Martiqaad Sabab La'aan ah
Ku soo noqoshada maalmaha hore ee webka, waxaad moodaa in qof walboo kugu soo gudbin doono adiga kaftanka emaylka iyo halyeeyada magaalooyinka. Waad ku saxi lahayd adoo adeegsanaya websaydhada sida Snopes ama u taah sidaad u tirtirtay fariimahooda, laakiin wadar ahaan waxaan wada ognahay in habdhaqankani uu ahaa mid cadho badan.
Sababta ay fariimahani u jahwareersanaayeen ayaa ah in taasi aysan umuuqan inay khusayso. Waxaad rajeyneysaa in qoyskaaga ay adeegsadaan emaylka si ay isugu dubbaridaan isu imaatinada iyo asxaabtaada si ay ugala hadlaan ganacsiga, oo aysan u gudbin dalabkii ugu dambeeyay ee internetka ee la jabiyay sanado kahor.
Mahadsanid, Shabakad caajis ah waxay u egtahay inay inta badan dhaqaaqday. Laakiin hadda sanduuqyada ayaa laga buuxsamay casuumaado aan kala sooc lahayn Waxaa naloo weydiiyay inaan badbaadino eeyo, ilaalinno deegaanka, ama aan u istaagno xuquuqda koox gaar ah oo xuquuqdooda maqan.
Iyo markale, sababahan oo dhami waa kuwo dhawaaq ah, laakiin waxay umuuqdaan kuwo kaladuwan. Waxay ku soo duuleen booskeenna. Haddii aad rabto inaad taageerto sabab, dooro mid ama laba si aad ugu dirto asxaabtaada. Haddii kale, waxaad u muuqan doontaa sida spammer.
# 4 - Jilicsanaanta Jilicsan
Waqtiga Suuqgeynta 101 cusboonaysiinta. Waa tan qeexitaan deg deg ah
U muuji rukhsad macaamiil, ama qaataha iimayl, emayl, ama fariin kale oo toos ah si loogu oggolaado suuqleydu inay soo dirto badeecad, macluumaad, ama farriimo dheeri ah.
Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aan ku siiyo awood cad inaad farriin ii soo dirto, waad sameyn kartaa sidaas. Laakiin ka waran haddii aan ku kulanno howlaha isku xirka oo aan ku siiyo kaarkayga ganacsiga? Taasi waxay ka dhigan tahay inaad shaqsi ahaan ila soo xiriiri karto, laakiin macnaheedu maahan inaan doonayo inaan ku daro liisas kasta.
Sidoo kale, haddii aan ku wada jirno isla liiska Jawaabta-Dhammaan, ma lihid rukhsaddayda inaad ku Jawaabto-Dhammaan wixii ku saabsan mowduuc aan ka ahayn kan gacanta ku haya.
Xusuusnow in ka-bixid macnaheedu tahay ka-soo-gal Haddii kale, waxaad u muuqan doontaa sida spammer.
# 3 - Ku xadgudubka nuqul kaarboon
Hubka ugu halista badan ee ku jira qalabkaaga dijital ah waa sanduuqa CC. Waxay la mid tahay sanduuq dhan oo ay ka buuxaan bam-gacmeedyo hubaysan: waxaad dooneysaa inaad si dhab ah uga taxaddarto isticmaalka mid keliya iyo ku dhowaad marnaba rabto inaad dhammaantood isku mar wada isticmaasho.
Xusuuso Brody PR Fiasco? Waa tan sharciga fudud:
Kaliya isticmaal kaarboon-nuqul haddii aad 100% hubto in 100% dadka liiska kujira ay sifiican isu yaqaanaan OO ay ku qanacsan yihiin fursada ah inay isla markiiba Jawaab-Dhammaan isla markaana ay isla markaaba qiimeeyaan Jawaab-Dhammaan.
Mar kasta oo aan helo fariin CC'd ah oo aanan ku aqoon dadka ku jira khadka CC, waxaan u maleynayaa: waxaad moodaa inaad tahay spamer.
# 2 - Afeefyo Hordhac ah
Weligaa ma maqashay xukun ku bilaabid "Dambi maleh, laakiin…" ama "Ha u qaadin sidan si khaldan?" Waad hubi kartaa inay ku hadlayaan wax naxariis darro ah. Ama waxaan u baahanahay inaan runta runta ah u sheegno ama fikradaheena aan kaligeen iska ilaalino. WALIGU waxay u egtahay mid ilaalinaysa in la dhaho: "Waan ka xumahay SPAM, laakiin…"
Marka – ha sameyn! Haddii aad ballanqaaddo inaadan badanaa ahayn spammer, waxaad u muuqataa inaad tahay spammer.
# 1 - Farriinta guud ee gaarka loo leeyahay
Halkan waa: habka ugu xun ee ugu xun ee aad ugu ekaato spammer. Waa markaad farriin u dirto shaqsi shaqsi ah oo loogu talagalay iyaga oo keliya, laakiin si sahal ah ugu dhici kara qof walba.
Tusaalaha weyn waa farriinta tooska ah ee Twitter (DM) ama farriin qoraal ah. Tixgeli tan:
Haye, ma jeclaan laheyd inaad u sheegto asxaabtaada boggeena cusub? Waxay ku taal http://www.example.org. Mahadsanid!
Tani waxay sifiican u noqon laheyd fariin shaqsiyeed, farsamo gacmeed loo diray qof kaliya. Si kastaba ha noqotee, waxay u akhrinaysaa sida loogu diri lahaa malaayiin! Haddii aad dirto ogeysiis u muuqda inuu guud yahay kanaal gaar loo leeyahay, waxaad u ekaan doontaa spammer. Isbarbardhig tan:
Haye Robby, waxaad na siisay jawaab celin sidan u weyn markii aan dhisaynay boggeena cusub. Hadda way joogtaa, si xor ah u la wadaag haddii aad rabto.
Taasi uma muuqato inay tahay spam. Hubso in farriimahaagu khaas yihiin, sidaa darteed uma eka inaad tahay spammer!
Tags: abusebrody prnuqul kaarboonxadgudubka emaylkaafeef emayldooran inafeef horudhac ahfariin gaar ahspamfariin toos ah twitterspam spam
Robby Slaughter waa khabiir shaqo iyo wax soo saar leh. Diiradiisu waxay ka caawinaysaa ururada iyo shaqsiyaadka inay noqdaan kuwo waxtar badan, waxtar badan oo ku qanacsan shaqada. Robby waa shaqsi gacan ka geysta joornaalada dhowr gobol waxaana wareysi la yeeshay daabacaadaha qaranka sida Wall Street Journal. Buuggiisii ​​ugu dambeeyay waa Cunnooyinka aan laga adkaan karin ee Dhacdooyinka isku xirka.. Robby wuxuu wadaa a la-tashiga horumarinta ganacsiga shirkadda.
Xogta Koowaad ee Guusha Bilowga Usbuuca
Indy waa StartUp Friendly
Jun 22, 2012 saacadu markay ahayd 8:05 AM
Maqaalka wanaagsan ee habka, sida ay tahay in la sheego in spamming
waa wax aad u xun oo wax u dhimaya isla markaana aan ilaawin biyo xireenka saxda ah ee xanaaqa. Waan ku raacsanahay in niman khiyaamo yaqaan ahi ay sameeyaan
runtii u adeegso softiweer, natiijooyinka wax soo saar sare, sidoo kale waxa aan loo maleyn karin
balooggu wuxuu soo dirayaa xiriiriyeyaal aan xiriir la lahayn meel kasta oo uu sameeyo isla waxyeello.
Si aan daacad u ahaado waxaan u maleynayaa in waqtigeeda aan wada wadaagnay mid caalami ah
aadaabta qaanuunka taas oo ku wargalin doonta spamer-ka aan la filaynin, in ay jirto
hab kale oo aad ugu dhejin kartid xiriiriyeyaasha boggagaaga.
Laakiin waxay ku lug leedahay u sameynta sida saxda ah, habka anshaxa iyo
habka ugu macquulsan, haddii aan ku faafin karno ereyga anshax gaar ah oo shaqaysay,
ka dibna waa inay u maraa waddo dheer yareynta inta badan spam-ka aan runtii helno,
si fiican halkan waa la rajeynayaa.